Lord of the Rings မိုဘိုငျးလျဂိမျးသဈ ထှကျမညျ – Gaming Noodle
Lord of the Rings ပရိသတျမြားနဲ့ မိုဘိုငျးလျဂိမျးခဈြသူပရိသတျမြားအတှကျ ဝမျးသာစရာသတငျးကောငျးတဈခု မကွာသေးမီက ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ တရုတျဂိမျးကုမ်ပဏီကွီးတဈခုဖွဈတဲ့ NetEase ဟာ Warner Bros Interactive Entertainment နဲ့ ပူးပေါငျးပွီး Lord of the Rings မိုဘိုငျးလျဂိမျးသဈကို ပွုလုပျနပွေီဖွဈကွောငျး ထုတျဖျောပွောကွားလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကွညောခကျြအတှငျးမှာတော့ အသဈထှကျပျေါလာမယျ့ ယငျးဂိမျးရဲ့နာမညျဟာ The Lord of the Rings Rise to War ဖွဈကွောငျး NetEase က အတညျပွုပွောကွားသှားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ယငျးဂိမျးအတှငျးက ပတျဝနျးကငျြအနအေထားကို Arda ကမ်ဘာရဲ့ပုံစံမြားအတိုငျး စိတျကူးယဉျပုံဖျောသှားမှာဖွဈကွောငျးနဲ့ J.R.R. Tolkien ရေးသားခဲ့တဲ့ ဇာတျကောငျမြားနဲ့ နရောအမြားအပွားကို ထညျ့သှငျးသှားမှာဖွဈကွောငျးတို့ကိုလညျး ကွညောသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီအကွောငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ Warner Bros Interactive Entertainment ရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဈဦးကတော့ ယခုအသဈထှကျပျေါလာမယျ့ဂိမျးမှာ ထူးခွားကောငျးမှနျတဲ့ ဂိမျးတှငျးပွုလုပျခကျြမြားရှိပွီး ကစားသူမြားအနနေဲ့ Middle Earth ရဲ့ ဇာတျကောငျမြားအကွောငျးကို ကောငျးစှာခံစားနိုငျကွမှာဖွဈကွောငျးနဲ့ ဂိမျးတှငျးတိုကျပှဲမြားမှာလညျး ဗြူဟာကကြကြစားကှကျမြား ပွုလုပျသှားနိုငျကွမှာဖွဈကွောငျး ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
NetEase ဟာ ဂိမျးမြားကို ဖနျတီးပွုလုပျရာမှာ လှနျစှာအတှအေ့ကွုံမြားပွားလှတဲ့ ကုမ်ပဏီကွီးတဈခုပါ။ ယငျးတို့ပွုလုပျဖနျတီးခဲ့တဲ့ Fantasy Westward Journey ဟာ တရုတျနိုငျငံမှာ အလှနျလူကွိုကျမြားတဲ့ မိုဘိုငျးလျဂိမျးတဈခုဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျထိ ဝငျငှစေုစုပေါငျး ဒျေါလာ ၂ ဘီလီယံကြျော ရရှိထားပါတယျ။
Warner Bros. ဟာ Lord of the Rings ဂိမျးမြားထုတျလုပျဖွနျ့ခြိခှငျ့ကို ၂၀၁၀ ထဲက စတငျရရှိထားခဲ့တာဖွဈပွီး Aragorn’s Quest နဲ့ Middle Earth: Shadow of Mordor တို့ကို ပွုလုပျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ယခုလို ကုမ်ပဏီကွီး ၂ ခု ပူးပေါငျးပွုလုပျကွမယျ့ Lord of the Rings ဂိမျးသဈဟာ ပရိသတျမြားရဲ့စိတျဝငျစားမှုကို ဖမျးစားလကျြရှိပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဂိမျးထှကျပျေါလာမယျ့နစှေဲ့အတိအကနြဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကိုတော့ ထုတျဖျော ကွညောခဲ့ခွငျး မရှိသေးပါဘူး။ ခတျေအဆကျဆကျမှာ လူကွိုကျမြားပွီး လူအမြားရဲ့အားပေးမှုကို အထူးတလညျခံခဲ့ရတဲ့ Lord of the Rings ရဲ့ မိုဘိုငျးလျဂိမျးသဈထှကျပျေါလာမယျ့အကွောငျးကို ပရိသတျမြား အတှကျ ဖျောပွလိုကျရပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
Lord of the Rings မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းသစ် ထွက်မည်
Lord of the Rings ပရိသတ်များနဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းချစ်သူပရိသတ်များအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတစ်ခု မကြာသေးမီကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တရုတ်ဂိမ်းကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ NetEase ဟာ Warner Bros Interactive Entertainment နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး Lord of the Rings မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းသစ်ကို ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြေညာချက်အတွင်းမှာတော့ အသစ်ထွက်ပေါ်လာမယ့် ယင်းဂိမ်းရဲ့နာမည်ဟာ The Lord of the Rings Rise to War ဖြစ်ကြောင်း NetEase က အတည်ပြုပြောကြားသွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယင်းဂိမ်းအတွင်းက ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကို Arda ကမ္ဘာရဲ့ပုံစံများအတိုင်း စိတ်ကူးယဉ် ပုံဖော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ J.R.R. Tolkien ရေးသားခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင်များနဲ့ နေရာအများအပြားကို ထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုလည်း ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ Warner Bros Interactive Entertainment ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးကတော့ ယခုအသစ်ထွက်ပေါ်လာမယ့်ဂိမ်းမှာ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ဂိမ်းတွင်းပြုလုပ်ချက်များရှိပြီး ကစားသူများအနေနဲ့ Middle Earth ရဲ့ ဇာတ်ကောင်များအကြောင်းကို ကောင်းစွာခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဂိမ်းတွင်းတိုက်ပွဲများမှာလည်း ဗျူဟာကျကျကစားကွက်များ ပြုလုပ်သွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
NetEase ဟာ ဂိမ်းများကို ဖန်တီးပြုလုပ်ရာမှာ လွန်စွာအတွေ့အကြုံများပြားလှတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုပါ။ ယင်းတို့ပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Fantasy Westward Journey ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အလွန်လူကြိုက်များတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ဝင်ငွေစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံကျော် ရရှိထားပါတယ်။
Warner Bros. ဟာ Lord of the Rings ဂိမ်းများထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခွင့်ကို ၂၀၁၀ ထဲက စတင်ရရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး Aragorn’s Quest နဲ့ Middle Earth: Shadow of Mordor တို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယခုလို ကုမ္ပဏီကြီး ၂ ခု ပူးပေါင်းပြုလုပ်ကြမယ့် Lord of the Rings ဂိမ်းသစ်ဟာ ပရိသတ်များရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖမ်းစားလျက်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂိမ်းထွက်ပေါ်လာမယ့်နေ့စွဲအတိအကျနဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့ ထုတ်ဖော် ကြေညာခဲ့ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ လူကြိုက်များပြီး လူအများရဲ့အားပေးမှုကို အထူးတလည်ခံခဲ့ရတဲ့ Lord of the Rings ရဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းသစ်ထွက်ပေါ်လာမယ့်အကြောင်းကို ပရိသတ်များ အတွက် ဖော်ပြလိုက်ရပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။